हिमाञ्चल प्रदेश सीमामा चीनको अद्भुत रफ्तार, अत्तालियाे भारत ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS POLITICS PRABAS हिमाञ्चल प्रदेश सीमामा चीनको अद्भुत रफ्तार, अत्तालियाे भारत !
हिमाञ्चल प्रदेश सीमामा चीनको अद्भुत रफ्तार, अत्तालियाे भारत !
एजेन्सी । चीनले हिमाञ्चल प्रदेशको किन्नौर, लाहौल र स्पीति जिल्लाहरूसँग जोडिएका ठाउँमा सडक, पुल र हेलिप्याडको निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै आफ्नो सेनाको उपस्थिति तीव्र गतिमा बढाउँदै आएको छ।
हिमाञ्चल प्रदेशका गभर्नर राजेन्द्र अर्लेकरलाई दिइएको रिपोर्टमा, राज्यका पुलिसले दुई दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको उद्धृत गरिएको छ।
‘विगत एक वर्षमा, चीनले पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को उपस्थिति बढाएको छ । हिमाञ्चल प्रदेशको सीमानामा आफ्नो पूर्वाधार र निगरानी क्षमतामा सुधार गरेको छ,’ राज्यका प्रहरी महानिर्देशक सञ्जय कुण्डुले शुक्रबार शिमलामा भने।
किन्नौर र लाहौल र स्पीति जिल्लाहरूले चीनसँग २४० किलोमिटरको सीमा जोड्छन्। जसमा लाहौल र स्पितिको चुमारमा ८० किलोमिटर र किन्नौर जिल्लाको दारोतीदेखि मुम्री डोगरीसम्मको १६० किलोमिटर खण्ड समावेश छ।
कर्मचारीहरूको लागि पीएलए भवन आवास
चीनले परीचु नदीको उत्तरी किनारबाट नयाँ भित्री भूभागको चुरुपमा नयाँ सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसैगरी चीनले सीमावर्ती शाक्टोत, चुरुप र दुनमुर गाउँमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
चीनले चुरुप गाउँमा नयाँ भवनहरूसँगै उच्च गुणस्तरीय निगरानी, उपकरणले सुसज्जित नयाँ चौकीहरू स्थापना गरेको छ।
पीएलएले लाप्चा पासको रान्डो गाउँमा रहेको आफ्नो स्थायी अड्डा वरपर मान्जा र साङ्राङ्लामा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्षेत्रमा ठूला मेसिनरी र सवारी साधनको आवतजावत हुने गरेको छ ।
चिनियाँ सेनाले लाप्चा पास क्षेत्रमा सैनिकका लागि आवास निर्माण गरिरहेको छ । यसबाहेक, चीनले क्युक गाउँमा निर्माण सामग्री भण्डारण गरेको छ र लापशाक क्षेत्रमा सेनाका लागि नयाँ ब्यारेकहरू निर्माण गरेको छ।
सन् १९६२ को युद्धमा शान्तिपूर्ण मोर्चा
हिमाञ्चल प्रदेशको चीनसँगको २४० किलोमिटर सीमा सन् १९६२ को चिनियाँ आक्रमणका बेला पनि शान्तिपूर्ण रह्यो तर पछिल्ला केही वर्षयता पीएलएले यस क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिलाई तिव्रता दिएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ हेलिकप्टरले भारतीय वायु क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । किन्नौरको संवेदनशील कौरिक सेक्टरमा गत वर्ष दुईपटक हेलिकप्टर घुसेको रिपोर्ट आएको थियो।
स्पितिको गाउँनजिकै चट्टानहरूमा पनि चिनियाँ चिन्हहरू फेला परेको थियो। सेनाको गस्ती दलहरूले भारतीय क्षेत्रको १ किलोमिटरभित्र पीएलएले छोडेको बियरका बोतल र ऊर्जा पेय फेला पारेका छन्।
पीएलएले भारतीय सेना र इन्डो–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा सञ्चालित भारतीय सीमामा तैनाथ आफ्ना इकाइहरूको बल बढाएको छ।
चीनले क्योरब्राङ पास नजिकैको री गाउँमा ५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । पीएलएको निर्माण शाखाले खेमकुर पास नजिकै शियुलदेखि खेमकुल जोड्ने सडक चौडा गरेको छ। घुग्राङ पासमा पनि सडक निर्माण भएको देखिएको छ ।
एचपी पुलिसद्वारा बटालियन बढाउन सिफारिस
भारतीय सेनाले सेप्टेम्बरमा किन्नौरको गुन्ग्राङ पासमा आठ पीएलए कर्मचारीहरूको टोली पत्ता लगाएको थियो। दुवैतर्फका सेनाले ‘गो ब्याक’को नारा लगाएका थिए ।
गत वर्ष हिमाञ्चल प्रदेश (एचपी) का प्रहरी प्रमुख कुण्डुले स्थितिको आँकलन गर्न पाँच टोलीलाई सीमा क्षेत्रमा पठाएका थिए। उनले हिमाचल प्रदेश सरकारलाई सुदृढ सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने, स्पिति उपत्यकामा हवाई पट्टी निर्माण गर्ने, किन्नौर र लाहौल–स्पीति स्काउटहरूको बटालियनहरू सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि खडा गर्नेजस्ता सिफारिसहरू भएका छन्। विपद् र विपद्को अवस्थामा उद्दार योजना बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । हिन्दुस्तान टाइम्सबाट